တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နီပေါဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံသမ္မတ H.E. Mrs. Bidhya Devi Bhandari နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နီပေါဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံသမ္မတ H.E. Mrs. Bidhya Devi Bhandari နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
နီပေါနိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီးရောက်ရှိနေသည့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ယနေ့ညနေပိုင်းတွင် နီပေါဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံသမ္မတ H.E. Mrs. Bidhya Devi Bhandari နှင့် ခတ္တမန္ဒူမြို့၊ သမ္မတရုံး ဧည့်ခန်းမတွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ နီပေါဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး ဦးထွန်းနေလင်း၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာစစ်သံ (ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်မှူးချုပ် သိန်းဇော်တို့ တက်ရောက်ကြပြီး နီပေါဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတနှင့်အတူ အစိုးရအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် နီပေါဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတက ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော်ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အားလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါကြောင်းနှင့် အောင်မြင်သည့်ခရီးစဉ် ဖြစ်ပါစေကြောင်းကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က မိမိအားလက်ခံတွေ့ဆုံသည့် အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း၊ ယခုချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်သည် နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်ကြားဆက်ဆံရေးနှင့် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကိုမြှင့်တင်နိုင်ရန်နှင့် ရှိပြီးသားနှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးပိုမိုခိုင်မြဲစေရန်အတွက် လာရောက်ခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊ နီပေါကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ်နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ် တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီမှုများရရှိခဲ့ကြောင်း၊ တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ဆက်ဆံရေးနှင့်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးချစ်ကြည်တိုးတက်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစတင်၍ပြည်သူမှရွေးချယ်သည့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းအတိုင်းလျှောက် လှမ်းလျက်ရှိပြီး တပ်မတော်မှပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ နီပေါနိုင်ငံ၏ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို အတွေ့အကြုံတစ်ရပ်အနေဖြင့် လေ့လာခွင့်ရရှိသည့်အတွက်အကျိုးရှိပါကြောင်း၊ နီပေါနိုင်ငံအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာတွင် မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှထောက်ခံရပ်တည်ပေးမှုနှင့် မိမိချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်လာရောက် ချိန်တွင်အဆင်ပြေချောမွေ့စွာစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ခြင်းများအတွက်လည်း အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားသည်။
နီပေါဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံသမ္မတ H.E. Mrs. Bidhya Devi Bhandari က ယခုလာရောက်သည့် ခရီးစဉ်သည် နှစ် ၅၀ အတွင်းမြန်မာ့တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအနေဖြင့် ပထမဆုံးလာရောက်သည့်ခရီးစဉ်ဖြစ်၍ နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ဆက်ဆံရေးအတွက် အထူးအရေးပါသော ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်ဖြစ်ပြီး နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးအတွက် အထောက်အကူပေးနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်မှတိုးမြှင့်ရရှိမည့် တပ်မတော်ချင်းဆက်ဆံရေးသာမက ပြည်သူချင်း ဆက်ဆံရေးကိုအခြေခံ၍ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးများတိုးမြှင့်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏ ခရီးစဉ်လာရောက်ချိန်တွင် နီပေါနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးအား အထူးသီးသန့်အစီအစဉ်တစ်ရပ်အနေဖြင့် အချိန်မီ ခန့်အပ်လွှာ လက်ခံပေးခဲ့ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသမ္မတကြီးကျန်းမာချမ်းသာစေကြောင်းနှင့် မြန်မာပြည်သူများ သာယာဝပြောပါစေရန်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းနောက်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ယခုချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်သည် အောင်မြင်မှုရှိသောခရီးစဉ်ဖြစ်ပြီး နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည့်အတွက် ဝမ်းမြောက်ပါကြောင်း၊ တပ်မတော်ဆိုသည်မှာနိုင်ငံတော်ကို ကာကွယ်ပေးရမည့်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး မြန်မာ့တပ်မတော်အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံသားများအတွက်အပြည့်အဝ အကာအကွယ်ပေးရန် ကြိုးစားဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသမ္မတကြီးနှင့်မြန်မာပြည်သူများအတွက် ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးခြင်းကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြန်လည်ဆွေးနွေးပြောကြားသည်။
ထို့နောက်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က နီပေါဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံသမ္မတအား အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးအပ်သည်။
ထို့အတူ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းကလည်း နီပေါဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ် H.E. Mr. Sher Bahadur နှင့်လည်းကောင်း၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Mr. Bhimsen Das Pradham နှင့်လည်းကောင်းသီးခြားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံခဲ့ရာတွင်မြန်မာ-နီပေါ နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ရေး ခရီးစဉ်များအဆင့်အလိုက်အပြန်အလှန်လည်ပတ်ရေး၊ လေ့ကျင့်ရေးနှင့်အားကစားဆိုင်ရာများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများနှင့် ပြည်သူမှရွေးချယ်သည့်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်တွင် လျှောက်လှမ်းနေမှုအခြေအနေများ၊ နီပေါနိုင်ငံမှ ကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေးတပ်ဖွဲ့များတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေမှုအခြေအနေများနှင့် နှစ်နိုင်ငံ တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြားချစ်ကြည်ရေးတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲများအပြီးတွင်အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများအပြန်အလှန် ပေးအပ်ခဲ့ကြပြီး စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြသည်။
( Unicode Version)
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ နီပေါဖကျဒရယျ ဒီမိုကရကျတဈသမ်မတနိုငျငံသမ်မတ H.E. Mrs. Bidhya Devi Bhandari နှငျ့ တှဆေုံ့ဆှေးနှေး
နီပေါနိုငျငံသို့ ခဈြကွညျရေးခရီးရောကျရှိနသေညျ့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ ယနညေ့နပေိုငျးတှငျ နီပေါဖကျဒရယျ ဒီမိုကရကျတဈ သမ်မတနိုငျငံသမ်မတ H.E. Mrs. Bidhya Devi Bhandari နှငျ့ ခတ်တမန်ဒူမွို့၊ သမ်မတရုံး ဧညျ့ခနျးမတှငျ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးသညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံးမှ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား၊ နီပေါဖကျဒရယျဒီမိုကရကျတဈသမ်မတနိုငျငံဆိုငျရာ မွနျမာနိုငျငံသံအမတျကွီး ဦးထှနျးနလေငျး၊ အိန်ဒိယနိုငျငံဆိုငျရာ မွနျမာစဈသံ (ကွညျး၊ရေ၊လေ) ဗိုလျမှူးခြုပျ သိနျးဇျောတို့ တကျရောကျကွပွီး နီပေါဖကျဒရယျဒီမိုကရကျတဈ သမ်မတနိုငျငံ သမ်မတနှငျ့အတူ အစိုးရအဖှဲ့မှ တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့စဉျ နီပေါဖကျဒရယျဒီမိုကရကျတဈသမ်မတနိုငျငံ သမ်မတက ဗိုလျခြုပျမှူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျ ဦးဆောငျသော မွနျမာ့တပျမတျောခဈြကွညျရေး ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့အားလှိုကျလှဲစှာကွိုဆိုပါကွောငျးနှငျ့ အောငျမွငျသညျ့ခရီးစဉျ ဖွဈပါစကွေောငျးကွိုဆိုနှုတျခှနျးဆကျစကားပွောကွားသညျ။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျက မိမိအားလကျခံတှဆေုံ့သညျ့ အတှကျကြေးဇူးတငျပါကွောငျး၊ ယခုခဈြကွညျရေးခရီးစဉျသညျ နှဈနိုငျငံတပျမတျောနှဈရပျကွားဆကျဆံရေးနှငျ့ ခဈြကွညျရငျးနှီးမှုကိုမွှငျ့တငျနိုငျရနျနှငျ့ ရှိပွီးသားနှဈနိုငျငံခဈြကွညျရေးပိုမိုခိုငျမွဲစရေနျအတှကျ လာရောကျခွငျး ဖွဈပါကွောငျး၊ နီပေါကွညျးတပျဦးစီးခြုပျနှငျ့တှဆေုံ့ဆှေးနှေးစဉျ တပျမတျောနှဈရပျအကွား ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမွှငျ့တငျရေးဆိုငျရာ သဘောတူညီမှုမြားရရှိခဲ့ကွောငျး၊ တပျမတျောနှဈရပျအကွား ဆကျဆံရေးနှငျ့ခဈြကွညျရငျးနှီးမှုတိုးမွှငျ့ခွငျးဖွငျ့ နှဈနိုငျငံဆကျဆံရေးခဈြကွညျတိုးတကျမညျဖွဈကွောငျး၊ မွနျမာနိုငျငံတှငျ ၂၀၁၁ ခုနှဈမှစတငျ၍ပွညျသူမှရှေးခယျြသညျ့ ပါတီစုံဒီမိုကရစေီလမျးကွောငျးအတိုငျးလြှောကျ လှမျးလကျြရှိပွီး တပျမတျောမှပါဝငျကူညီဆောငျရှကျလကျြရှိကွောငျး၊ နီပေါနိုငျငံ၏ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျကို အတှအေ့ကွုံတဈရပျအနဖွေငျ့ လလေ့ာခှငျ့ရရှိသညျ့အတှကျအကြိုးရှိပါကွောငျး၊ နီပေါနိုငျငံအနဖွေငျ့ နိုငျငံတကာမကျြနှာစာတှငျ မွနျမာနိုငျငံဘကျမှထောကျခံရပျတညျပေးမှုနှငျ့ မိမိခဈြကွညျရေးခရီးစဉျလာရောကျခြိနျတှငျအဆငျပွခြေောမှစှေ့ာစီစဉျဆောငျရှကျပေးခဲ့ခွငျးမြားအတှကျလညျး အထူးကြေးဇူးတငျရှိပါကွောငျး ဆှေးနှေးပွောကွားသညျ။
နီပေါဖကျဒရယျ ဒီမိုကရကျတဈသမ်မတနိုငျငံသမ်မတ H.E. Mrs. Bidhya Devi Bhandari က ယခုလာရောကျသညျ့ ခရီးစဉျသညျ နှဈ ၅၀ အတှငျးမွနျမာ့တပျမတျော ခေါငျးဆောငျတဈဦးအနဖွေငျ့ ပထမဆုံးလာရောကျသညျ့ခရီးစဉျဖွဈ၍ နှဈနိုငျငံတပျမတျောနှဈရပျအကွား ဆကျဆံရေးအတှကျ အထူးအရေးပါသော ခဈြကွညျရေးခရီးစဉျဖွဈပွီး နှဈနိုငျငံဆကျဆံရေးအတှကျ အထောကျအကူပေးနိုငျမညျဖွဈကွောငျး၊ ယခုခဈြကွညျရေးခရီးစဉျမှတိုးမွှငျ့ရရှိမညျ့ တပျမတျောခငျြးဆကျဆံရေးသာမက ပွညျသူခငျြး ဆကျဆံရေးကိုအခွခေံ၍ နှဈနိုငျငံဆကျဆံရေးမြားတိုးမွှငျ့နိုငျမညျဖွဈကွောငျး၊ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ၏ ခရီးစဉျလာရောကျခြိနျတှငျ နီပေါနိုငျငံဆိုငျရာ မွနျမာနိုငျငံသံအမတျကွီးအား အထူးသီးသနျ့အစီအစဉျတဈရပျအနဖွေငျ့ အခြိနျမီခနျ့အပျလှာ လကျခံပေးခဲ့ကွောငျး၊ မွနျမာနိုငျငံသမ်မတကွီးကနျြးမာခမျြးသာစကွေောငျးနှငျ့ မွနျမာပွညျသူမြား သာယာဝပွောပါစရေနျဆုမှနျကောငျးတောငျးပါကွောငျးပွောကွားခဲ့သညျ။
ယငျးနောကျတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက ယခုခဈြကွညျရေးခရီးစဉျသညျ အောငျမွငျမှုရှိသောခရီးစဉျဖွဈပွီး နှဈနိုငျငံဆကျဆံရေးနှငျ့ ခဈြကွညျရငျးနှီးမှုကို တိုးမွှငျ့ပေးနိုငျသညျ့အတှကျ ဝမျးမွောကျပါကွောငျး၊ တပျမတျောဆိုသညျမှာနိုငျငံတျောကို ကာကှယျပေးရမညျ့အဖှဲ့အစညျးဖွဈပွီး မွနျမာ့တပျမတျောအနဖွေငျ့ မွနျမာနိုငျငံနှငျ့ နိုငျငံသားမြားအတှကျအပွညျ့အဝ အကာအကှယျပေးရနျ ကွိုးစားဆောငျရှကျလကျြရှိကွောငျး၊ မွနျမာနိုငျငံသမ်မတကွီးနှငျ့မွနျမာပွညျသူမြားအတှကျ ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးခွငျးကိုလညျး အထူးကြေးဇူးတငျရှိပါကွောငျးပွနျလညျဆှေးနှေးပွောကွားသညျ။
ထို့နောကျတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက နီပေါဖကျဒရယျဒီမိုကရကျတဈ သမ်မတနိုငျငံသမ်မတအား အမှတျတရလကျဆောငျပစ်စညျးပေးအပျ သညျ။
ထို့အတူ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျသညျ ယနမှေ့နျးလှဲပိုငျးကလညျး နီပေါဖကျဒရယျဒီမိုကရကျတဈသမ်မတနိုငျငံ ၀နျကွီးခြုပျ H.E. Mr. Sher Bahadur နှငျ့လညျးကောငျး၊ ကာကှယျရေးဝနျကွီး Mr. Bhimsen Das Pradham နှငျ့လညျးကောငျးသီးခွားစီတှဆေုံ့ဆှေးနှေးခဲ့သညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ခဲ့ရာတှငျ မွနျမာ-နီပေါ နှဈနိုငျငံတပျမတျောနှဈရပျအကွား ခဈြကွညျရေး ခရီးစဉျမြားအဆငျ့အလိုကျအပွနျအလှနျလညျပတျရေး၊ လကေ့ငျြ့ရေးနှငျ့အားကစားဆိုငျရာမြား ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေး၊ မွနျမာနိုငျငံ၏ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးမြား ဆောငျရှကျနမှေုအခွအေနမြေားနှငျ့ ပွညျသူမှရှေးခယျြသညျ့ပါတီစုံဒီမိုကရစေီလမျးကွောငျးပျေါတှငျ လြှောကျလှမျးနမှေုအခွအေနမြေား၊ နီပေါနိုငျငံမှ ကုလသမဂ်ဂငွိမျးခမျြးရေးတပျဖှဲ့မြားတှငျ တာဝနျထမျးဆောငျနမှေုအခွအေနမြေားနှငျ့ နှဈနိုငျငံ တပျမတျောနှဈရပျအကွားခဈြကွညျရေးတိုးမွှငျ့ဆောငျရှကျရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြားအား အပွနျအလှနျဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲမြားအပွီးတှငျအမှတျတရ လကျဆောငျပစ်စညျးမြားအပွနျအလှနျ ပေးအပျခဲ့ကွပွီး စုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျခဲ့ကွသညျ။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော်ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နီပေါတပ်မတော်ကြည်းတပ် ဦးစီးချုပ် Gen. Ranjendra Chhetri က တည်ခင်းဧည့်ခံသည့် ဂုဏ်ပြုညစာ စားပွဲ အခမ်းအနားသို့တက်ရောက်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ကာကွယ်ရေးအတွင်းဝန် H.E. Mr. Sanjay Mitra အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
မေ ၁၆၊ ၂၀၁၉ Admin 0
အောက်တိုဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၈ Admin 0